Primatiora Mahazoarivo : Nanao veloma farany Robert Yamate -
AccueilSongandinaPrimatiora Mahazoarivo : Nanao veloma farany Robert Yamate
Primatiora Mahazoarivo : Nanao veloma farany Robert Yamate
Raharaha farany nahenoana ny masoivoho Amerikanina tamin’ny asa maha diplaomaty azy teto Madagasikara dia ilay resaka fahafatesan’omby tany Antsirabe, tapitra mantsy ny fe-potoana iasany, ary raha ny fantatra dia hisotro ronono ihany koa ity farany. Omaly no nanomboka niteny nanao veloma ireo tompon’andraiki-panjakana i Robert Yamate, ary afaka andro vitsivitsy dia handao an’ i Madagasikara ity diplomaty amerikanina ity. Omaly izao dia nisy ny fitsidihana fanaovam-belona izay nataony teny Mahazoarivo, ary nandray azy tamin’ izany ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier. Nambarany tamin’ izany ny fahafaliam-pony sy ny fahafam-pony amin’ny lafin’ny fifandraisan’ny firenena roa tonta dia i Madagasikara sy Etats unis izany. Raha ny tomban’ny asa vitany kosa indray dia nanambara i Robert Yamate fa nisy ny vokatra, indrindra amin’ ny fahatratrarana ny tanjona fohy ezaka amin’ny fahavitan’ny fotodrafitrasam-pikarohana ao Ranomafana, ny ady natao taminy valanaretina pesta, ny tsy fanjarian-tsakafo ny ankizy any atsimon’ny nosy, teo ihany koa ny fanampiana ireo traboina noho ny fandalovan’ ny rivodoza farany teo.
Manoloana ny ezaka tanterahina amin’ ny fampandrosoana indray kosa dia nilaza i Robert Yamate fa
“manana mpitondra mahay ny eto Madagasikara” raha ny nambarany hatrany, dia nolazainy ihany koa fa “ raha ireo praiminisitra nifanesy ihany koa dia nahalala tsara ny tokony hatao” . Izany rahateo no nahatsara ny fifandraisana teo amin’ i Madagasikara sy Etats unis. Porofon’izany hoy Robert Yamate ny fanomezana 20 tapitrisa dolara ho fanampihana ny fiarovana ny tontolo iainana. Mikasika ny fifidianana kosa dia nolazain’ ity masoivoho Amerikanina ity fa mahatoky ny tenany amin’ ny havitan’ i Madagasikara fifidianana madio sy milamina ary mangarahara. Handao an’i Madagasikara izany i Robert Yamate rehefa niasa ny nonina teto Madagasikara nandritra ny telo taona sy telo volana. Eo ampiandrasana izay ho solony kosa indray dia ny mpanolotsaina voalohany Wilson Stuart izany no hiandraikitra ny fampandehan-draharaha eo anivon’ny masoivohon’ i Amerika